Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii maamulka jaaliyada Minneapolis oo si habsami ah u qabsoomay
Shirkii maamulka jaaliyada Minneapolis oo si habsami ah u qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ August 5, 2012
Shalay oo ay taariikhdu aheed 4.08.2012 waxaa hoolka shirarka ee jaaliyada S.Ogaadenya ee Minneapolis lagu qabtay shirkii bilaha ahaa ee xubnaha maamulka Jaaliyadda. Shirka maamulka jaaliyada ayaa waxaa xidhiidhinayey gudoomiyha jaaliyada halgame Mahamed Cabdi, isagoo ugu horeen ba kusoo dhaweyey sidii caadad aheed wacadigii diiniga ahaa oo uu soo jeediye mudane Sheekh Ahmed Majeerteen oo ah, wakiilka jaaliyadaha North America. Mudane Axmed Majeerteen ayaa ka hadlay bisha barakeysan ee ramadaan iyo waajibaadka inaga saaran sidii wax loogu qaban lahaa agoonta iyo maatida reer Ogadenia ee kasoo barokacay dhulkoodii hooyo kuna sugan dhamaan xryaha qaxootiga ee meela kala duwan oo ah dawladaha dariska inala ah.
Shirkan oo ahaa mid si’aad ah loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qaybgalay madax sare oo ka tirsan golaha dhexe ee JWXO, maamulka jaaliyada Minnesota iyo masuuliin kaleba. Waxaa mar labaada lagu soo dhaweye madasha shirka mudane Ahmed Majerteen oo goobta ka akhriyey wareegtadii ugu dabeysay ee Gudoomiyaha JWXO Admiraal Maxamed Cumar Cismaan.
Waxaa isagana warbixin kooban ka bixiyey arimaha siyaasadeed iyo sida ay ukala daadsantahay xukuumadii gumeysiga ee Ethiopia iyo u diyaar garowga looga baahanyahay shacabka Ogadenia sidii ay guushooda ku hanan lahaayeen Hogaanka Qorshaynta iyo Cilmi Baadhista mudane Maxamuud Nuur oo shirka kala soo qayb galay. Hogaanka ayaa wuxu xubnaha u sheegay in Itoobiya ay hada maamul la’aan tahay isla markaan qaybsan tahay. Mudane Mahamud ayaa yidhi; “Cidana looga sheekeyn maayo maanta xaalada Itoobiya oo waad aragtaan dhafoorkeeda iyo waxa ka dhacaya Adis Ababa”.
Waxaa kaloo kamid ahaa masulintii ka hadalay oo ka mid ahaa marti sharaftii kasoo qaybgashay shirkan Dr. Cabdirashiid Cali Gooni oo ka tirsan HAAB.Waxuu Dr. Cabdirashiid dardaaran ahaan oogu bishaareyay dadkii shirka fadhiyay iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed in xoriyada Ogaadeenya ay soo iftay oo laga sugayo in ay Soomaali oo dhan soo dhaweeyaan iyaga oo u teelo dhiganaya, wuxuuna qof walba oogu baqay in si guud iyo si gaar ahba loogu hiiliyo halganka xaqa iyo xalaasha ah ee Soomaalida Ogaadeenya. Hadalka Dr-ka ayaaa shirka aad dareenkiisa u kiciyey.
Guud ahaan Xubnahan Iyo Masuulinta ururka ee ka soo qaybgalay shirka ayaa isla qaatay In loo baahan yahay in la xoojiyo Halganka ka socda Ogadeniya.